၂၀၁၈ မှာ အရောင် ၃ ရောင်နဲ့ထွက်ရှိလာမယ့် Samsung Galaxy A8 (2018)! – AsiaApps
၂၀၁၈ မှာ အရောင် ၃ ရောင်နဲ့ထွက်ရှိလာမယ့် Samsung Galaxy A8 (2018)!
December 20, 2017 December 27, 2017 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ၂၀၁၈ မှာ အရောင် ၃ ရောင်နဲ့ထွက်ရှိလာမယ့် Samsung Galaxy A8 (2018)!
လာမယ့် ၂၀၁၈ မှာတော့ Samsung Brand ရဲ့ Mid-range Smartphone အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Galaxy A series ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Galaxy A8 (2018) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Roland Quandt အမည်ရှိသူကတော့ Twitter မှာ Samsung Galaxy A8(2018) နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ထွက်ရှိမဲ့အရောင်တွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Galaxy A8(2018) အတွက်အရောင်တွေကတော့ Black, Gold and Orchid Gray တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Roland Quandt ကတော့ Tips တွေကိုဖော်ပြရာမှာ မှန်ကန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အခုသတင်းကတော့ မှန်ကန်လောက်မှာပါ။
အမည်း နဲ့ ရွှေရောင်ကတော့ ကျွန်တော်တို့မြင်ဖူးနေကျ အရောင်လေးတွေဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Galaxy A3, Galaxy A5 နဲ့ Galaxy A7 တို့မှာလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပေမယ့် အရမ်းကြီးစွဲဆောင်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် Orchid Gray အရောင်လေးကတော့ တော်တော်စွဲဆောင်မှုရှိနေတာကို ၂၀၁၇ မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Samsung Brand ရဲ့ High-end Smartphone အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Galaxy S8/S8 + နဲ့ Galaxy Note 8 တို့ကိုကြည့်ခြင်းဖြင်းသိရှိနိုင်မှာပါ။
Galaxy A series တွေက Mid-range အမျိုးအစားတွေဖြစ်နေပေမယ့် ၂၀၁၈ မှာထွက်ရှိမယ့် Galaxy A8 ကတော့ High-end အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ Galaxy A8(2018) ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သတင်းတွေလိုထွက်ရှိလာမှာလား (သို့) တခြားပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်ရှိလာမှာလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
We’re fairly confident, though, that the A (2018) handsets will come in black, gold, and Orchid Gray, even if they aren’t the only color choices that Samsung might offer in all markets.
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမယ့် Huawei ရဲ့ Smartphone အသစ်!